Kalsiyum Hydride Powder, CaH2 - Goodao Technology Co., Ltd.
loogu talagalay metallurgy budada, oo leh zirconium, niobium, hafnium iyo yareynta metaloxides kale, oo hel budada birta u dhiganta. Waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay wakiil dhaliya haydarojiin fuuq bax ah, haydarojiin, isku soo uruurinta ama isdifaaca xeryahooda dabiiciga ah
Lambarka CAS 7789-78-8
Sifooyinka budada cawlan
Barta dhalaalida 675'C
Cufnaanta 1. 9g / cm3 aa
Isticmaala loogu talagalay metallurgy budada, oo leh zirconium, niobium, hafnium iyo yareynta metaloxides kale, oo hel budada birta u dhiganta. Waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay wakiilka dhaliya haydarojiin ee fuuqbaxa, hydrogenation, isku soo ururaya ama isdifaaca xeryahooda dabiiciga ah
Astaamaha kaalshiyam hydride
Magaca Shiinaha: Kaalshiyam hydride
Qaaciddada Molecular: CaH2
Barta dhalaalida: 675 ℃
Cufnaanta: 1.7 (biyaha cufnaanta qaraabada = 1)
Calcium hydride, kiimiko caadi ah, ayaa laga helaa CaH2, oo leh culeyska molikiyuulka ee 42.10. Kiristaalo-cadaan-cad ama buur-buur, si sahal ah lagu dari karo, oo loo isticmaalo hoos u dhigista wakiilka, qalajiye, falanqaynta falanqaynta kiimikada, iwm. Sidoo kale waa muraayad rhombic ah oo aan midab lahayn. Wax soosaarka warshadaha waa cawl, orthorhombic ama budo. Xasaasi u ah qoyaanka. Kama falceliso hawo qalalan, nitrogen iyo koloriin heerkulka qolka, laakiin waxay la falgashaa gaasaska kor ku xusan ee heerkulka sare si ay u soo saaraan kalsiyum oksaydh, kaalshiyam oksaydh ah iyo kaalsiyam chloride, siday u kala horreeyaan. Waxay sidoo kale la falgeli kartaa ethanol si loo soo saaro hydrogen iyo kalsiyum ethanol. Yaraynta biraha oksaydhka ayaa ka xoog badan kan sodium hydride ama lithium hydride.
ISTICMAALKA kaalshiyam hydride
Waxaa loo adeegsaday metallurgy-ka budada ah, marka la kululeeyo 600 ~ 1000 ℃, waxaa lagu yareyn karaa zirconium, niobium, hafnium iyo biraha kale ee oksaydhka ah, iyo budada birta u dhiganta. Waxaa loo isticmaali karaa inuu noqdo koronto-dhaliye la qaadan karo, yareynta wakiilka, qalajiyaha, falcelinta falanqaynta.
Hore: Budada Titanium, Ti
Xiga: Hafnium Hydride Powder, HfH2